Umxube we-Lever Wash Basin Mixer kwiTyp Chrome
Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Ukucofa igumbi lokuhlambela kwigumbi lokuhlambela elifanayo / Ilever enye yokuhlamba isitya sokuhlambela i-Chrome
Isikhuseli sangoku esineglasi enye yokuphelisa umngxunya wegumbi lokuhlambela elingaphezulu kwe-arc ene-intshi ezi-4 zeplani ye-chrome izisa imvakalelo yanamhlanje kulo naliphi na ikhaya. Ukuqhubekeka kwetekhnoloji-yokupholisha okuninzi kunye nomaleko omuhle we-chrome kubonakaliswa kakhulu, kulula ukucoceka, kwaye kuthintele ukukrala nokudumba. Isikhephe sokuntywila samanzi sinamanzi angena ku-1/4 ibhokisi yokujika ye-ceramic kwaye siyakwazi ukumelana novavanyo lweemvavanyo zokuvula nokuvala ezingama-500,000. Ubunjineli obuphambili be-ceramic bukulungele kwaye buchanekileyo.
30 DAYS limited UKUBUYELA KUNYE NEMALI NGOKUGQIBELA UQINISEKISO:Simi ngasemva kweemveliso zethu, zonke iifompo zasekhitshini zixhaswa yiminyaka emi-3 iwaranti ebekiweyo, ukubuya kweentsuku ezingama-30 kunye nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali. Ukuba kukho nawuphi na umbuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi, siyavuya ukunika izisombululo kwangexesha
Iteknoloji yokonga amanzi ekrelekrele: i-bubbler yazisa umoya ekuhambeni kwamanzi ukuze yenze iqamza elikhulu elimhlophe, kwaye umoya namanzi zixutywe ngokupheleleyo ukufezekisa injongo yokonga amanzi.
Isibambo se-Ergonomic: izivumelwano zokubamba nge-ergonomics, ukubambelela kukhululekile, kwaye iswitshi igudile kwaye isimahla
Ukuxhotyiswa ngombhobho wobungqina bokuqhuma: Ubume obungafaniyo obungenakunqandwa bunokuthintela ukubanjiswa kunye nokuvuza okubangelwa kukutsala, kuyenze izinze kwaye yomelele.
Isiponji somzimba esinzima: ukupakishwa okufanelekileyo ngakumbi, ukubonakala okuhle nokuhle, akukho lula ukwaphula, ukunciphisa umngcipheko wezothutho
Phawu: Imitha faucets
Intaba yetheyipu: IHole enye
Inani lezibambo: Ukuphathwa okukodwa
Uhlobo: lwale mihla
Unyango umphezulu: likhazimlisiwe
Izinto zomzimba: Brass
Izinto ezingundoqo zeValve: ICeramic
I-SKU: I-EVE-0162-chrome iindidi: Ukuhlamba igumbi lokuhlambela, Ukucofa igumbi lokuhlambela kwigumbi lokuhlambela elifanayo tags: zegumbi Sink, ikherubhiki yeceramic, Isicaphucaphu
WOWOW Isinqe sefinki Matte Mnyama
WOWOW 8 intshi ebanzi kwindawo yokuhlambela isitofu isitayile ...